OUKITEL C12 Pro: laharana fidirana miaraka amin'ny notch sy efi-trano roa | Androidsis
OUKITEL C12 Pro: Ny faran'ny fidirana vaovao miaraka amin'ny notch
OUKITEL dia nanolotra telefaona maro tao anatin'izay volana lasa izay, ny ankamaroan'izy ireo dia ao anatin'ny faritra K izy.Fa ny orinasa kosa dia mamela antsika modely vaovao hahatratra faritra vaovao. Amin'ity tranga ity dia ny OUKITEL C12 Pro, telefaona iray mahatratra ny isan'isan'ny mpamokatra sinoa. Miatrika fitaovana iray miloka amin'ny laharam-boninahitra amin'ny endriny isika.
Ity OUKITEL C12 Pro ity dia miloka amin'ny endrika maoderina iray, ary mamela antsika hanana fahatsapana tsara amin'ny lafiny manokana. Mampiseho ny fandrosoana azon'ity faritra ity ao anatin'ny marika sinoa. Inona no azontsika antenaina amin'ity maodely ity?
Ny OUKITEL C12 Pro dia hanana efijery lehibe 6,18-inch miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9. Ny tahan'ny dia tsy novaina tamin'ity tranga ity noho ny fisian'ny notch. Ny loko eo amin'ny efijery dia miavaka noho ny hamafiny, izay mahatonga azy io ho finday tsara raha tsy maintsy mahita sary na horonan-tsary isika. Ny bateria, miaraka amin'ny fahaizany 3.300 mAh, dia hanome antsika fahaleovan-tena ampy.
Ny marika dia nitandrina tsara tamin'ny famolavolana ity maodely ity, miaraka amin'ny vatana iray izay miavaka amin'ny endriny sy ny famirapiratany. Tena ahazoana aina ny mitazona tànana, ary koa manome fiheverana ny hakantony. Ao ambadiky ny fitaovana mahita fakantsary indroa izahay, MP + 8 + 2. Mahagaga ny mahita fakan-tsary indroa ao amin'ilay faritra fidirana.
Ary koa, ao ambadik'ity OUKITEL C12 Pro ity hitantsika ny sensor sensor, izay miasa haingana be. Tsy vitan'ny fakan-tsarin'ny dian-tànana fotsiny isika, satria ny telefaona koa dia nisafidy ny hampiditra ny famohana ny fankasitrahana ny endrika, amin'ny endrika ID ID madio indrindra.
Raha tsy izany, ny OUKITEL C12 Pro dia miloka amin'ny processeur MediaTek MT6739 quad-core miaraka amin'ny hafainganana 1,5 GHz, miaraka amina RAM 2 GB. Ho fanampin'izay, efa miaraka amin'ny Android 8.1 Oreo ho toy ny rafitra fiasa izy io, miaraka amin'ny traikefa mpampiasa mivaingana. Ity modely ity dia antenaina hamely ny tsena amin'ny volana septambra. Inona no fahatsapana avelan'ity maodelin'ny marika ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OUKITEL C12 Pro: Ny faran'ny fidirana vaovao miaraka amin'ny notch
Access ARCHOS 57: finday Android Go misy 4G